HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulÇekmeköy Sultanbeyli Qiimaha Qiimaha Guryaha La Iibiyo
Çekmeköy Sultanbeyli Qiimaha Qiimaha Guryaha La Iibiyo
03 / 12 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
cekmekoy sultanbeyli metro qiimaha, sicirka guryaha saqafka
Qalabka qiimeynta guryaha ee tikniyoolajiyadda ku saleysan ee teknoolojiyadda Indexa.com ayaa shaacisay qiimaha dib u soo celinta guryaha ee ku yaal xaafadaha Çekmeköy Metro Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line, dhismaha kaas oo dib loo bilaabay loona qorsheeyay in la furo rubuc qarnigii ugu dambeeyay ee 2022. Veysel Karani, 449 oo celcelis ahaan kun kun ah ayaa soo jiidatay sida meesha oo leh qiimaha guryaha ugu sarreeya.
Shaqadii ayaa dib loo bilaabay Çekmeköy anc Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line, kaas oo dhismihiisa uu sii waday 2. Xariiqda xarunta 10,9 km 8, 26 bishii Nofembar, xaflad lagu qabtay qoditaankii TBM ayaa loo yareeyey tunka mar kale.
Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line, kaas oo la qorsheynayo in la furo rubuc qarnigii ugu dambeeyay ee 2022 isla markaana ah sii wadida Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Line, wuxuu ku yaalaa Quarter Assembly, Sarıgazi (xarunta is-dhexgalka), Isbitaalka Magaalada, Abdurrahmangazi, Samandıs Kara, Waxay ku dhamaan doontaa wadada Sultanbeyli TEM.
SANCAKTEPE MECLİS NEIGHBORHOOD PRICE 325 THOUSAND TL
Sida ku xusan xogta hada ee Indexa, oo dabooleysa degmooyinka halka xariiqda metrooga ay dhaafi doonaan, guud ahaan aagga 105 m2, qiimaha mitir laba jibaaran cabirku waa 2.709 TL, celceliska qiimaha guriga waa 325 kun oo TL iyo celcelis celceliska maalgashiga ayaa ah 25 sano. Kirada celcelis ahaan waa 1.035 TL.
Sancaktepe, celceliska iibka mitirka laba jibbaaran ee iibka iibku waa 2.400 TL, celceliska qiimaha guryuhu waa 280 kun TL, celceliska kirada waa 975 TL, soo noqoshada xilliga maalgashiga waa 24 sano. Marka qaybinta nooca guryaha ah la qaddariyo, celceliska qiimaha 1 + 1 ee Sancaktepe waa 257 kun TL, isugeynta guud waa 70 m2, muddada soo noqoshada waa 24 sano; 2 + 1s 239 kun TL, bedka guud ee 95 m2, wareegga waqtiga 26 sanadka; 3 + 1s 290 kun TL, waqtiga wareegga 26 sanadka.
GURYAHA GUUD EE 280 THOUSAND TL IN SARIGAZİ
Aagga guud ee guryaha lagu iibinayo iyada oo qiimahoodu dhexdhexaad yahay Sarıgazi halka tareenka dhulka mari doono uu yahay 110 m2, qiimaha halbeega waa 2.560 TL, celceliska qiimaha guryuhu waa 280 kun TL, celceliska soo laabashada maalgashiguna waa 26 sano. Kirada waa 976 TL.
Aagga guud ee guryaha lagu iibiyo oo leh qiime dhexdhexaad ah Abdurrahmangazi, oo ah joogsi kale oo tareenka dhulka hoostiisa ah, waa 120 m2, qiimaha halbeega waa 2.800 TL, qiimaha qeybta waa 336 kun TL, celceliska soo celinta maalgashiga ayaa ah 23 sanadka. Kirada waa 1.141 TL.
Metro iyo Metrobus Lines Qiimaha Qiimaha Guriyeynta
Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line iyo Çekmeköy - Khadka Tareenka ee Taşdelen…
Mashiinka tunnida Looma Yaqaano Goobta Dhismaha ee Workekmeköy Sultanbeyli Metro Work
Ogaysiiska Qandaraaska: Qabashada-Sancaktar-Sultanbeyli Dhismaha Tareenka
Khadadka moobiilka ayaa qiimo sarre u leh qiimaha guryaha
Qiimaha Guryaha ee Çekmeköy Sultanbeyli Metro Route
Khadka Isku-xirka ee Seksi-Sancaktepe-Sultanbeyli
Qiimaha Guryaha Magaalada Istanbul
Qiimaha Guryaha ee Veysel Karani
Maanta ee Taariikhda: 4 Dec 1929 alwaaxiyaha alwaaxlaha seexda